Maungtintyin: အကျွန်ုပ် ယုံကြည်ချက်ကို ပြောင်းလဲသင့်ပါသလား?
ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် ဆန်စခရစ်ဝေါဟာရကတော့ dharma parivartana ဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေးတိဘက်ကျမ်းစာများမှာ ဒီဘာသာရပ်အတွက် အခြေခိုင်နေပြီးဖြစ်တဲ့ စကားရပ်တော့ မရှိပါ။ တရုတ်နိုင်ငံမှာ ဒီအတွက် ဝေါဟာရတစ်ခုခုများ ရှိသလားဆိုတာ အကျွန်ုပ်မသိပါ။ စေတနာအလျောက် မိမိရဲ့ဘာသာကို ပြောင်းလဲခြင်းရဲ့အယူအဆကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းဂန်များမှာ တကယ်ပဲ ပါဝင်ပါတယ်။ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။
ဒါက ထင်ရှားတဲ့ဘာသာရေးမှာ ထောက်ခံသူတစ်ယောက်က- အဲဒီမှာ သူ့ကို ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တဲ့ ဘာသာတစ်ခုထက်- အခြားဘာသာတစ်ခုမှာ တိကျကောင်းမွန်တဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်အင်္ဂါရပ်များကို တွေ့မြင်တဲ့အခါ- သူဟာ သူ့ရဲ့ နိုးကြားနေတဲ့ စိတ်နှလုံးသားကြောင့် အခြားဘာသာကို ရွေးချယ်နိုင်တယ်-လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ ဒီအရာအတွက် စကားလုံးထွင်ခဲ့တဲ့ တိဘက်စကားလုံးကတော့- ဘာသာတရားတစ်ခုမှ အခြားဘာသာတရားတစ်ခုသို့ ကူးပြောင်းခြင်းလို့- ဆိုလိုတဲ့ chos-sgyur-ba ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာသာတရားရဲ့အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဘေးအန္တရာယ်မှ ကယ်ဆယ်မှုကို ရရှိဖို့- လွတ်မြောက်မှုကို ဆိုက်ရောက်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ဝတ္ထုဆိုင်ရာအတွက် မဟုတ်ပါ။ ဒ့ါကြောင့် လွတ်မြောက်မှုကို ရရှိဖို့ ဒါမှမဟုတ် အခြားသူများကို ကူညီဖို့ အကျိုးသက်ရောက်ခြင်းရဲ့ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အတွေးများဖြင့် လမ်းကြောင်းကို ရှာဖွေပါတယ်။
မိမိရဲ့ဘာသာတရားကို ပြောင်းလဲဖို့အတွက် လိုအပ်မှုကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခံစားရလျင် ကူးပြောင်းခြင်းဟာ တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ အခြေခံသဘောတရားများနှင့် လုံးဝကိုက်ညီပါတယ်။ ဘာသာတရားကို ပြောင်းလဲဖို့ အခြားသူများကို အကြောင်းခံဖြစ်စေခြင်းမှာ- ဒါက အခြားသူများရဲ့ အပြုအမူတစ်ခုခုရဲ့ ရလဒ်ကဲ့သို့- အဲဒီလို ပြုလုပ်နေတဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ အနေအထားတစ်ခုမှာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီပြဿနာမှာ သတိထားရမဲ့ စိစစ်ခြင်းအတွက် လိုအပ်ချက် ရှိပါတယ်။ ရှာဖွေစူးစမ်းကြပါစို့။
(၁) ဘာသာတရား ပြောင်းလဲမှုဟာ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ဒေသနာတော် ဒါမှမဟုတ် ဟောကြားချက်ရဲ့ အကျိုးဆက်လား?
(၂) ဒါက သူတို့ရဲ့ဘာသာကို ပြောင်းလဲဖို့ အခြားသူများကို အကြောင်းခံဖြစ်စေတဲ့ ဆွဲဆောင်သိမ်းသွင်းမှုရဲ့ အခြေအနေတစ်ခုလား?
(၃) ဒါမှမဟုတ် ပြောင်းလဲမှုဟာ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို လက်ကိုင်ပြုတဲ့ တွန်းအားပေးခြင်း သိမ်းသွင်းဆွဲဆောင်ခြင်းရဲ့ ရလဒ်လား?
ပထမအခြေအနေက ဘာသာတရားဆိုင်ရာ သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ ခေတ်စား ရေပန်းစားပါတယ်။ ယနေ့ လက်ခံကျင့်သုံးနေတဲ့ တစ်ခုပါ။ များစွာသော ဘာသာရေးဆိုင်ရာယဉ်ကျေးမှုများက သူတို့ရဲ့ ဓမ္မကို ဒါမှမဟုတ် သူတို့ရဲ့ ဘာသာရေးကို ဟောကြားဖို့ အခြားနိုင်ငံများသို့ dharmadoots (ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာ သတင်းစကား ပြောကြားသူများ)ကို ပို့လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ လမ်းကြောင်းတစ်ခုက ဒါကို ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းသော အပြုအမှုတစ်ခု ဒါမှမဟုတ် သူတို့ရဲ့ dharma (ဘာသာတရား တာဝန်)လို့ ယူဆပါတယ်။
သို့သော်လည်း အခြေအနေဟာ ဒုတိယ ဒါမှမဟုတ် တတိယ ဖြစ်လျင် အဲဒီအခါ သတိထားထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် လိုအပ်ချက်တစ်ခု ရှိပါတယ်။
လူမှုရေးနှင့်စီးပွါးရေးဆိုင်ရာ အဖိုးအခက ပြောင်းလဲမှုအတွက် အကြောင်းပြချက်များ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာသာရေးစနစ်တစ်ခုဟာ ကျန်သည့်အခြားတစ်ဖက်ကအရာထက် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း လူတစ်ယောက်ကို အကောင်းဆုံးအဆင့်အတန်းကို ပေးနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကောင်းဆုံး အခွင့်အလမ်းအလားအလာကို ကမ်းလှမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေမှာ တစ်ဦးချင်းအလိုက် သူတို့ရဲ့ ဘာသာတရားကို ပြောင်းလဲဖို့ မပြောင်းလဲဖို့ စိတ်ကြိုက်လွတ်လပ်ခွင့်ကို ဂရုစိုက်အလေးထားသင့်ပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ ဆက်စပ်ပတ်သက်တဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဘက်တော်သားများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများအတွက် လက်သင့်ခံနိုင်တဲ့ သင့်လျော်တဲ့နည်းလမ်းနှင့်ယန္တရား ရှိသင့်ပါတယ်။ ဘာသာတရားဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုကို အတင်းအကျပ်တွန်းအားပေးခြင်း၊ ခြားနားတဲ့နည်းစနစ်များကို သုတ်လိမ်းခြင်း လူးထည့်ခြင်းဖြင့် မိမိပိုင်ဘာသာထဲသို့ သွေးဆောင်ဖြားယောင်ခြင်း၊ လက်ခံထားတဲ့ မည်သည့်နှုန်းစံနဲ့မဆို သဘောချင်း မကိုက်ညီတဲ့ နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုခြင်းများက လက်သင့်ခံနိုင် နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းတာတော့ မဟုတ်ပါ။
ဟောပြောနေတဲ့ဓမ္မဟာ မှန်ကန်ရိုးဖြောင့်ခြင်းနှင့်ပြုလုပ်သင့်သည်သာမက ဒါက အဲဒီလိုပါ ထင်မြင်သဘောရပုံ ပေါက်သင့်ပါတယ်။ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တဲ့ ဘာသာရေးဆိုင်ရာယဉ်ကျေးမှုကို လိုက်နာခြင်းဟာ ဘေးမသီရန်မခ အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်တားဆီးမှုနှင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အလေ့အထနဲ့ပတ်သက်လို့ အကောင်းဆုံး ဦးတည်ရာဘက် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ မကြာခဏ ပြောခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီဖော်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ အကျွန်ုပ်ရဲ့နားလည်ခြင်းကတော့ အခိုက်အတံ့ တိုးတက်မှုအမြတ်အစွန်းရဲ့ ဆင်ခြင်ခြင်းဆိုင်ရာနှင့်အတူ ဘာသာအသစ်တစ်ခုကို ထွေးပိုက်လက်ခံယုံကြည်ခြင်းဟာ ဘ၀နဲ့ပတ်သက်တဲ့ သာမန်အခြေအနေမှာ နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းပုံပေါ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သေခြင်းတရားကဲ့သို့သော အရေးပါတဲ့ အခိုက်အတံ့မှာ ကြီးမားလွန်းတဲ့မရေရာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခု ရှိပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါက ဘာသာသစ်မှာ အခိုင်အမာသက်သေထူးတဲ့ သန်မာတဲ့ အခြေခံအဆောက်အဦးတစ်ခု ပိုင်ဆိုင်ခြင်းရဲ့ ရပ်တည်ချက်မှာ လုံးဝခြားနားတဲ့ အခြေအနေတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
တပသီဖြစ်တဲ့သူများကို ခြွင်းချန်ချက်နှင့်အတူ ပုံမှန်အားဖြင့် ဘာသာတရားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့သူများအတွက် လှုံဆော်အားပေးမှုဟာ သုံးမျိုးသုံးစား ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
(တစ်)- ဘ၀မှာ ပျော်ရွှင်ဖို့၊
(နှစ်)- သေဆုံးတဲ့အချိန်မှာ သက်သောင့်သက်သာရှိဖို့၊
ပြီးတော့ (သုံး)က - ဟိုမှာဘက်ဘ၀တွင် ဘေးဆီးရန်ကာခြင်းဆိုင်ရာ ကျေနပ်အားရတဲ့ ခံစားမှုတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ ဆုပ်ကိုင်နိုင်ဖိုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် သုံးခုသောဒီအရာတွေဟာ ဘယ်ဘာသာဖြစ်ဖြစ် လိုက်ပါဖို့ရာ (မိမိရဲ့ ဘာသာတရားကို အစားထိုးပြောင်းလဲလို၍ဖြစ်စေ မပြောင်းလဲဘဲနေလို၍ဖြစ်စေ-) တစ်ဦးတစ်ယောက်ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်တာကို ထောက်မကူညီနိုင်တဲ့ “စံ မှတ်ကျောက်” ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Maungtinyin (မောင်တင့်ယဉ်) at Friday, July 08, 2011